Afganistana: Vaovao Momba Ilay Voafonja Sayed Pervez Kambakhsh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2017 3:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, বাংলা, English
(Marihina fa tamin'ny 25 Novambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Afaka nihaona tamin'ilay mpianatra ho mpanao gazety Sayed Pervez Kambakhsh izay nogadraina tao amin'ny fonjan'i Pul-e Charkhi i Nasim Fekrat, Afgana mpanao gazety tsy miankina iray.
Toa diso fanantenana izy ary nanofahofa ny tanany tamim-pahakiviana. Afaka nanantona azy segondra vitsivitsy aho mba hihaino azy, izay tena sarotra noho ny tabataba. Nisy nisintona tamin'ny soroko havia tampoka aho teo ary nahita polisy roa, izay nanontany ahy izay nolazaiko tamin'i Kambakhsh.
Tsy navelan'ny polisy hanakaiky azy intsony aho. Saingy nanam-potoana hiresahana tamin'i Sayed Kambakhsh momba ilay loka aho, mba hilaza aminy fa nahazo ny Lokan'ny Fiarovana sy ny Fahalalahan'ny Serasera tany Italia izy. Naneho ny hafaliam-pony tamin'ity vaovao ity izy, saingy ny teny farany reko taminy dia ny hoe: “Mila fanampiana aho hivoahana ny fonja.”
Tsy nanome ahy fahafahana hiresaka taminy intsony ny polisy, nanofahofa ny tanako aho noho izany ary nampanantena azy fa hitondra ny hafatra ho any ivelany.
Nitatitra ny fitsarana an'i Sayed Kambakh ny Global Voices ato sy ato ary ato .